Nleta na Castillo de los Guzmanes na Niebla, Huelva | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Spain obodo, omenala, General, Huelva
Nyaahụ anyị mere a gaa na Guzmanes Castle na Niebla, Huelva. Achọrọ m ịga leta ụlọ a, n'ihi na m mere ya dịka nwatakịrị ma nwee ezigbo ncheta banyere ya.
Ozugbo anyị rutere obodo Niebla, n’oké anwụ na-achasi ike n’agbanyeghị na ọ fọrọ nke nta ka anyị metụta ọnwa Nọvemba, anyị gbalịrị ịchọta ebe a na-adọba ụgbọala ka o kwere mee n’obí eze. Ikekwe n'ihi na anyị hapụrụ oge zuru oke (anyị rutere gburugburu 12:50 n'ụtụtụ) ọ naghị esiri anyị ike ịchọta ebe dị mma ị ga-adọba ụgbọala, na ọ bụghị ebe dị anya. A obere ije pụọ bụghị naanị ndị Castillo de los Guzmanes kamakwa Iekpụrụ Ngosipụta Ochie nke ahụ dabara na ngwụsị ụka a. A ochie ngosi dị ná mpụga nke nnukwu ụlọ mgbidi bụ nke zuru okè enyi ma ọ bụrụ na ị na-achọ iji chegharịa mgbe ochie Mpaghara dị ka ezi uche dị ka o kwere.
Na Medieval Fair anyị nwere ike ịchọta ihe niile: site na ụdị tarot na-agụ onye na-agu akwukwo ozi gi, ma nke oma ụlọ ncha nke ncha na esemokwu, na-agafe na otu ebe iko onu ogugu emere ha n'oge a, ozo ebe inwere ike egbugbu ihe na henna, ndị ọzọ si akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, ndị ọzọ si arịa rọba, ndị ọzọ si chiiz, otu n’ime mma agha na katanas, wdg. O doro anya na enwerekwa mweghachi, nke na-atọ anyị niile ndị bịara ya ụtọ. pizzas, anụ, mkpụrụ osisi, biya biya, wdg.. Niile a ọnọdụ dị ka ọ bụghị ya peculiar Nme ebe ndi Knight gosiputara na ha ji mma agha ma umu nwanyi mara mma jeghariri na uwe ha kacha mma, wdg.
Ozugbo anyị kpebiri ịgafe mgbidi kacha elu nke nnukwu ụlọ ahụ, ihe anyị hụrụ n'ime ya bụ ụlọ ahịa ndị ọzọ site na ụlọ ngosi oge ochie, ụfọdụ ụlọ nke ndị bi n'obodo ahụ na n'ikpeazụ ọnụ ụzọ nke dugara n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ. N’ebe ahụ anyị na-akwụ ụgwọ anyị kwekọrọ tiketi, 4 euro nke obula, nke gunyere nleta obula anyi choro n’ulo a rue oge mmechi ya (20:00 pm), agba ogbe, foto n’oge ejiji na njeghari nlegharị anya nke mpaghara na bọs ndi njem.
Banye Castillo de los Guzmanes
Ihe mbụ anyị hụrụ n’elu abanye n’obí eze bụ nke ya atụmatụ akụkụ anọ, kewara n'ime ogige abụọ buru ibu nke ọtụtụ ụlọ elu nwere agba anọ gbara gburugburu. Nchebe a na-arị elu na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ ma nwee atụmatụ akụkụ anọ nke agha na-agbachitere. Ihe eji wu ulo a bu ngwakọta okwute na apịtị. Isi mmalite nke a nnukwu ụlọ si oge roman, foduru nke e ji rụọ ụlọ ndị Alakụba, ndị rụpụtara ebe ewusiri ike nke batara n'aka Ndị Kraịst na 1262 n'ihi ọrụ Alfonso X. Nke ahụ bụ, nnukwu ụlọ nke Ndị Rom, ndị Arab na Ndị Kraịst gafere, ọ bụ ezie na ekwenyekwara na ọ nwere ọnụnọ Turdetan.
Anyị nwere ike ịnweta ọtụtụ thematic ụlọ ndị dị otú ahụ dị ka Oflọ nke Countess, ebe o nwere akwụkwọ mmado ọ na-akọwa onye ọnụ ọgụgụ ebe ahụ bụ na maka oge o bi n'ụlọ elu ahụ, ngwa agha, nnụnụ agụ nkwọ na ụlọ mkpọrọNke ikpeazu bu nke kachasi obi uto ma mee ka ndi na-eme ihe nkiri di elu ...
Site na ọtụtụ ụlọ elu nke nnukwu ụlọ anyị nwekwara ike ịtụgharị uche maka Osimiri Tinto, pụrụ iche na ụwa maka ya mejupụtara na Akwa mmiri Rome na-agba ọsọ na ya.
Dika anyi mutara, ulo a guzogidere oke ala ọma jijiji nke mere na 1755 (o kpatara mmebi nke emesiri weghachite ya) na Agha nke Onwe, ebe French bibiri akụkụ nke mgbidi ya.
Dị ka ọ dị na mbụ n'edemede m, ọ bụghị naanị ịde ahụmịhe ahụ kamakwa ọ ga - amasị m kamakwa iji soro ha were foto (ha ejiri aka ha mee nke a) nke nwere ike iwere gị nso nso ụbọchị ahụ. N'ime ya ị nwere ike ịhụ ọnụ ụzọ etinyere mma nke nnukwu ụlọ, akụkụ nke Ngosipụta Ngosipụta Ngwangwa (gbasara ngosipụta nke anwụrụ ọkụ) na ebe a na-eme njem ngosi abụọ, nke sitere na osisi ya ma site n'elu ụlọ elu ahụ.
Dịka nkwubi okwu ikpeazụ, m ga-agbakwunye na achọtala m ọmarịcha ụlọ mara mma nke ọma, yana akụkọ dị ezigbo mkpa n'azụ ya yana ọchụnta nke ịnọ na obere obere enyi na enyi, dị nso na obodo Huelva ( ya mere naanị nkeji 20). A ga-agarịrị, na-enweghị mgbagha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Nleta na Castillo de los Guzmanes na Niebla, Huelva
Ebe a na-achọ ezumike na “ezi ndụ” (II)